Kooxda Al Shabaab oo Xalay Weerar Xoogan ku Qaaday Ciidamada Kenya ee Deegaanka Kuulbiyoow - Hablaha Media Network
Kooxda Al Shabaab oo Xalay Weerar Xoogan ku Qaaday Ciidamada Kenya ee Deegaanka Kuulbiyoow
HMN:- Dagaal saf ballaaran ah ayay Dagaalyahanada Al Shabaab xalay ku qaadeen Xereda ay ku suganyihiin Ciidamada Militariga Kenya ku leeyihiin Deegaanka Kulbiyow ee Gobolka Jubbada Hoose.
Dagaalyahanada Al Shabaab ayaa xilligii afurka ka dib dhinaca bari ka soo weeraray Xerada Ciidamada Kenya, Dagaalkan oo mudo hal saac ah socday ka dib, ayaa waxaa xoogii shabaabka lagu khasbay inay dib u gurtaan.
Hadaba qiyaastii 30 daqiiqo ka dib ayaa la sheegayaa in Xoogaga Shabaabka ay markale weerar ka soo qaadeen dhanka bariga, iyagoona dagaal qaraar ku wajahay ciidamadii Kenya iyo Ciidanka Maamulka Jubbaland ee deegaankaasi ku suganaa.
Sideedii iyo barkii fiidnimo ayaa waxaa la sheegayaa in weeraro is qarxin ah Xerada Ciidamada Kenya looga soo qaaday Koonfurta iyo Waqooyiga. Qaraxyadaasi waxaa gaystay niman la socday gaadiid walxaha qarxa laga soo buuxiyay.
Wixii xilligaasi ka dambeeyay ayaa waxaa go’day isgaarsiintii ka jirtay Kulbiyow, waxaana ciriiri noqotay xoggaha laga heli karo weerarka safka ballaaran ee lagu qaaday Xerada Ciidamada Kenya ee qaybta ka ah Amisom.
Warar aan weli la xaqiijin ayaa sheegaya in dagaal-yahanada Shabaabku ay gudaha u galeen xeradaasi, wixii ka dambeeyay qaraxyadii ismiidaaminta.